Usoro Ịzụ ahịa Forex na Ọnọdụ | Forex Trading dị mfe site n'aka FXCC
FXCC Okwu na Ọnọdụ
BỤRỤ GỤỌ NDỊ ỤLỌ NA NDỊ NA-AHỤ NA-ECHI.
NDỊ BỤ N'ỤLỌ A N'ỤLỌ NTỤTA Ị NA-EBE ỊBỤ N'ỤLỌ NDỊ NA NDỊ NA-ANYỊ NA-EBE BỤ EBE EBE A NA NTỤKWU NDỊ ỌZỌ. FXCC NA-AWỤ ikike ịgbanwe okpukpu abụọ na ọnọdụ na oge ọbụla na-enweghị ihe ọmụma nye gị. Ị NA-ECHERE IHE A GA-AHỤ NTỤTA NA ỤLỌ A. BỤRỤ NTỌ NKE NTỊ A NA-ECHI N'IZI ỌZỌ Ọ BỤLA AHỤRỤ GA-EME ỊDỤTA ỊCHỌRỤ. Ọ BỤRỤ NA Ị BỤGHỊ NTỤRỤ NA ỤWA NA NDỊ NA-AHỤ, BỤGHỊ BỤ AHỤ BỤ AHỤ BỤ AHỤ.
FXCC nwe ma na-ekwusi ike na saịtị a. Ọ dịghị ihe nbudata ma ọ bụ ntụgharị site na saịtị a ga-ebufe aha na ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ ihe si na saịtị a. Ihe ọ bụla ị na-ebuga na saịtị a na-aghọ nke FXCC, FXCC nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla gbasara iwu, ọ ga-agbakwunyere nkwupụta dị ka FXCC kwadoro ya, tinyere iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu nke iwu FXCC. FXCC na-akwado ikikere niile gbasara ikike nwebisiinka na ikikere nke ikikere nke ihe niile dị na saịtị a, ma mee ka ikike ndị dị otú ahụ dị oke iwu.
Ihe ndị dị na weebụsaịtị ahụ, gụnyere ma ọ bụghị njedebe na ihe niile e mere, ederede, vidiyo, ụda olu, na ihe oyiyi, nwere ikikere, ma ọ bụrụ na ekwughị na FXCC. Ewezuga ma ọ bụrụ na ekwughị n'ụzọ doro anya n'ime ebe a, ha nwere ike ghara depụtaghachi, transite, gosipụta, rụrụ, kesaa (maka ụgwọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ), nyere ikikere, gbanwere, mepụtara, echekwa maka iji ya, ma ọ bụ jiri ya mee ihe n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla na-enweghị FXCC tupu ederede nkwenye.
Ebe a na ihe ọmụma, ngwá ọrụ na ihe onwunwe dị na ya adịghị agwa, ma ọ bụ zubere ka a kesaara ma ọ bụ jiri ya mee ihe, onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke bụ nwa amaala ma ọ bụ onye bi na ma ọ bụ dị na ógbè ọ bụla ebe nkesa, akwụkwọ, nnweta ma ọ̄ bụ iji mee ihe megidere iwu ma ọ bụ ụkpụrụ ma ọ bụ nke ga-edozi FXCC ma ọ bụ ndị mmekọ ya na ndebanye aha ma ọ bụ ikike nke ikike n'ime ikike dị otú ahụ.
NKWUKWU NDỊ NA-AGBANYE NA ỊMỌDỤ ỤLỌ
A na-enye ozi gbasara saịtị a "Dịka ọ bụ". FXCC ekwenyeghị na ihe ziri ezi nke ihe ndị e nyere na ebe a, ma ọ bụ n'ụzọ doro anya ma ọ bụ n'ụzọ doro anya, maka nzube ọ bụla ma kwupụta n'ụzọ doro anya ikike ọ bụla nke ahịa ma ọ bụ ahụike maka otu nzube. FXCC agaghị enwe ụgwọ maka ọnwụ ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke nwere ike ịmalite site na ịntanetị site n'aka ndị ọzọ nke ozi ọ bụla nke dị gị site na saịtị a. Ọ bụ ezie na ihe ọmụma enyere gị na saịtị a nwetara ma ọ bụ gbakọtara site na isi mmalite anyị kwenyere na a pụrụ ịdabere na ya, FXCC enweghị ike ikwenye na izi ezi, ezi, oge ma ọ bụ izu ezu nke ozi ọ bụla ma ọ bụ data enyere gị maka otu nzube. FXCC, ma ọ bụ ndị mmekọ ọ bụla, ndị nduzi, ndị ọrụ ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ, ma ọ bụ onye ahịa ọ bụla nke atọ ga-atụle maọbụ nwee ọrụ ọ bụla maka ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ị na - eweta na ihe ọ bụla ọdịda ma ọ bụ nkwụsị nke saịtị a, ma ọ bụ sitere na omume ma ọ bụ nkwụsị nke ihe ọ bụla ọzọ metụtara itinye saịtị a ma ọ bụ data dị n'ime ya maka gị, ma ọ bụ site na ihe ọ bụla ọzọ metụtara gị ịnweta, enweghị ike ịnweta, ma ọ bụ iji saịtị ma ọ bụ ihe ndị a, ma ma ọ bụ na ọnọdụ ndị na-ebute ụdị nsogbu ahụ nwere ike ịbụ na FXCC ma ọ bụ onye ọ bụla na-ere na-enye nkwado ngwanrọ ma ọ bụ ọrụ.
Ọ nweghị ọnọdụ ọ bụla FXCC ga-enwe ike ịdabere na nkwụsị ọ bụla, ọdachi, pụrụ iche, ma ọ bụ ihe nlereanya nke na-esite na ojiji ma ọ bụ enweghi ike iji saịtị a ma ọ bụ akụkụ ọ bụla, n'agbanyeghị ma FXCC amawo na ọ ga-abụ na mbibi dị otú ahụ nwere ike ime na n'agbanyeghị ụdị omume, ma na nkwekọrịta, Tort (gụnyere ilegharaghị anya), Nkwụsị, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
Ihe edere na saịtị a bu n'obi maka atumatu ozi. Ya mere, ekwesighi ka ewere ya ma ọ bụ ịrịọ onye ọ bụla na ikike ọ bụla a na-enyeghị aka ma ọ bụ arịrịọ a ma ọ bụ onye ọ bụla ọ ga-akwado iwu iji nye onyinye ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ, ma ọ bụ dị ka nkwenye ka ịzụta, ire ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na-emeso ego ọ bụla. A na-agba gị ume ka ị nweta ego nkwụnye onwe, ego, iwu na ụtụ isi n'ihu ịmalite ego ọ bụla. Enweghị ihe ọ bụla dị na saịtị a kwesịrị ịgụ ma ọ bụ kọwaa dị ka ndụmọdụ ndụmọdụ ụlọ ọrụ na FXCC, ma ọ bụ ndị mmekọ ya, ndị nduzi, ndị isi ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ.
Ụdị itinye ego n'ime ngwá ọrụ akụ na ụba bụ na ọ bụghị ihe niile eji eji ego eme ihe maka onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ha:
maara ihe n'ihe gbasara ego,
enwe ike iburu ihe ize ndụ akụ na ụba nke ego ahụ,
ghọta ihe ize ndụ dị; ma
kwenyere na ego ahụ na-adabere maka ihe mgbaru ọsọ ha na mkpa ego.
Onye ọ bụla na-abụghị ọkachamara na-etinye ego na Financial Instruments, ọ bụ ihe amamihe na ọ bụ naanị akụkụ nke ego na-achọ itinye ego maka ogologo oge kwesịrị itinye ya.
Ọ dịkwa mma na ndị investors niile kwesịrị ịchọ ndụmọdụ site n'aka ndị ọkachamara na-ahụ maka ego na-atụ aro tupu ha etinye ego ọ bụla na Financial Instruments.
Ebube gaa n'ebe ndị ọzọ
Njikọ ndị na-abụghị FXCC Ebe nrụọrụ weebụ na-enye dịka ihe ederede maka isiokwu ndị nwere ike bara uru nye ndị ọrụ nke FXCC weebụsaịtị, FXCC enweghịkwa ikike ịchịkwa ọdịnaya dị na FXCC weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị họrọ ijikọta weebụsaịtị nke FXCC anaghị achịkwa, FXCC enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla, ma ọ bụ ekwupụta ma ọ bụ kwenye, gbasara ọdịnaya nke saịtị dị otú ahụ, gụnyere eziokwu, izu ezu, ntụkwasị obi, ma ọ bụ ihe ruru ya maka otu nzube ọ bụla, ma ọbụghị FXCC na saịtị ma ọ bụ ọdịnaya dị otú ahụ nweere onwe gị site na nkwanye ikikere nke nwebisiinka, ụghalaahia, ma ọ bụ mmejọ ọzọ nke ikike nke ndị ọzọ ma ọ bụ na saịtị ma ọ bụ ọdịnaya dị otú ahụ enweghị nje ma ọ bụ mmebi ọzọ. FXCC ekwenyeghị na ihe ziri ezi nke akwụkwọ na Intaneti. Njikọ na saịtị ndị FXCC adịghị egosi na nkwenye ọ bụla ma ọ bụ ọrụ maka echiche, echiche, ngwaahịa, ozi, ma ọ bụ ọrụ enyere na saịtị dị otú ahụ, ma ọ bụ ihe nnọchiteanya ọ bụla gbasara ọdịnaya dị na saịtị ndị dị otú ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-ekwurịta okwu na FXCC site na e-mail, ị kwesịrị ịdebe na nchebe nke e-mail Ịntanetị ejighị n'aka. Site n'iziputa ozi e-mail ma ọ bụ nzuzo ma ọ bụ nke ezoro ezo ị nabatara ihe ize ndụ nke enweghị mgbagwoju anya na enweghị ike nzuzo na Intanet. Ịntanetị abụghị 100% nchekwa ma onye nwere ike ịmekọrịta ma gụọ nkọwa gị.
Ozi ọ bụla ị nyere anyị ga-emeso dị ka onye nzuzo ma kenye naanị n'ime Ụlọ ọrụ ahụ, ndị mmekọ ya na ndị mmekọ azụmahịa ya, a gaghị egosikwa ha ọ bụla ọzọ ma e wezụga n'okpuru iwu ọ bụla ma ọ bụ usoro iwu. Usoro ntanetịime weebụ nwere ike ịnakọta data ịchọta peeji nke ị nweta, otu ị si chọpụta saịtị a, ugboro ole nleta na ihe ndị ọzọ. A na-eji ozi anyị natara iji melite ọdịnaya nke saịtị weebụ anyị ma nwee ike iji anyị kpọtụrụ gị, site n'ụzọ ọ bụla kwesịrị ekwesị, na iji nye gị ozi ọ bụla anyị kwenyere na ọ ga-abara gị uru.